Olan’ny Gem sy ny fanjakana : andrasana ny fifampidinihana | NewsMada
Tsy mbola nivaha ny olana! Araka ny notaterina teto, nilaza ampahibemaso ny Vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara (Gem) fa tsy hifampidinika amin’ny fanjakana intsony izy ireo raha tsy foanana ny didy mamaritra ny Advanced Cargo Declaration (ACD). Nohazavain’izy ireo fa tsy mifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny varotra iraisam-pirenena sy ny hetra eto Madagasikara ny faneren’ny fanjakana hampiharana azy ity, navoaka tamin’ny volana jolay 2015. Niezaka nitaky fanazavana, mikasika ny lafiny lalàna azy, ny Gem, saingy tsy nisy ny vahaolana niraisana teo amin’ny roa tonta nanomboka tamin’io fotoana io. Nambaran’ny Gem koa fa miara-miasa amin’ny mpandraharaha tompon’ny sambo izy ireo ary tsy mifanipaka ny hevitra ary tojo amin’izao fahatapahan’ny tady eo amin’ny mpandraharaha sy ny fanjakana izao.
Na foanana ny ACD na hampiharina
Manoloana ireo, nilaza ny minisitry ny Tetibola, tamin’iny herinandro lasa iny, fa misokatra hatrany ny fanjakana amin’ny fifampidinihana. Nanamafy izany ny filoha Rajaonarimampianina, ny zoma lasa teo, nandritra ny fitsidihany orinasa indostrialy iray eny Ambohimalaza, fa maotera mampandroso ny indostria ny sehata tsy miankina, olon-dehibe isika ary mahafantatra tsara ny lanjan’ny toekarena eto amin’ny firenena. Omena vahana ny fifampidinihana sy ny fifampitokisana raha sendra misy ny olana na tsy fitovian-kevitra.
Ankoatra ity tsy faneken’ny Gem ny hampiharana ny ACD ity, nomarihin’ny filohany, Rtoa Andriamamonjisoa Noro, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety ny zoma 5 febroary teo, koa, fa tsy noraisina mihitsy ny soso-kevitry ny sehatra tsy miankina tamin’ny famolavolana ny tetibolam-panjakana. Endriky ny tsy fihainoan’ny fanjakana azy ireo koa izany.
Midika ireo fa samy mahafantatra ny fototry ny olana ny roa tonta, ary efa nisy ny fifampidinihana hatramin’izay, saingy tsy nisy ny marimaritra niraisana. Raha hiverina ny fihaonana, inoana fa hisy avy hatrany fanapahan-kevitra, na hofoanana ny ACD na terena tsy maintsy aloan’ny mpandraharaha.